तिथि मेरो पत्रु »5तपाईं पहिलो तिथि मा सोध्नुपर्छ प्रश्न
पहिलो तिथिहरु साक्षात्कार जस्तै हुन सक्छ, तर आफ्नो प्रेम जीवनको लागि. तिनीहरूले तपाईँलाई भयातुर र उत्साहित दुवै बनाउन. अनि कहिलेकाहीं तपाईं आफैलाई त तारीख को अन्त गरेर तपाईं कि मिति विचार गरेर खपत पाउन सकेन, तपाईंले तिनीहरूलाई केही सिकें महसुस.
गनगन नगर्नुहोस्, एक समाधान यस लागि त्यहाँ.
यी5प्रश्न तिनीहरूलाई फेरि देखेर चासो हुनेछु यदि तपाईं आफ्नो पहिलो तारीख निर्धक्क थाह टाढा हिंड्न सुनिश्चित गर्नेछ.
के तपाईंको मनपर्ने कुरा के हो?
यसले हामीलाई धेरै आफैलाई बारेमा कुरा गर्न मन देखि एक सरल छ. यो तपाईं आफ्नो मिति गर्न मा ध्यान बारी गर्न अनुमति र साँच्चै तिनीहरूलाई आनन्दित तुल्याउँछ के सिक्न हुनेछ. तपाईं यो प्रश्न सोध्न सामान्यतया जब, आफ्नो मिति पनि आफ्नो मन नपर्ने प्रकट हुनेछ. आफ्नो चासोमा आधारित दोस्रो मिति लागि एक महान विचार हुन सक्छ आफ्नो प्रतिक्रिया लुकाइएको - सकारात्मक र नकारात्मक को नोट लिनुहोस्.
कसरी लामो तपाईं एकल भएको छ?
यो एक असहज प्रश्न हो जस्तो लाग्न सक्छ तर यो महत्त्वपूर्ण. आफ्नो मिति तिनीहरूलाई एकल हुनुको तर सक्रिय देख बनाम एकल हुन गर्नुहुन्छ भने थाह पाएपछि, तपाईं यो पहिलो मिति मा बुद्धिमानी आफ्नो समय लगानी गर्दै भने तपाईं थाह दिनु हुनेछ. तपाईं आफ्नो सम्बन्ध लक्ष्य मेल भन्ने निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ. तपाईं को दुई फरक-फरक कुरा चाहना र पछि थुप्रै मिति यस पत्ता लगाउन लागि तपाईं चाहनुहुन्छ अन्तिम कुरा हो.
तपाईं कुनै पनि भाइ बहिनी छ?
यो प्रश्न सोध्दा ठूलो छ फेरि किनभने, तपाईं आफ्नो मिति गर्न ध्यान मोड छन्. तपाईं पनि परिवार मा आफ्नो विचार मा दोहन गर्दै छन्. तिनीहरूले आफ्नै को एक परिवार सुरु गर्न चाहन्छु अन्ततः भने तिनीहरू पनि प्रकट गर्न सक्छ. सधैं भाइ बहिनी को विषय वरपर ठूलो कहानी छ यो प्रश्न तपाईं बारेमा कुरा गर्न धेरै दिनुहुनेछ.
के तपाईंको चिन्ह हो?
यो एक Oldie तर goodie छ. तपाईं मिति सुरुमा यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने यो एक राम्रो विचार हो. मानिसहरू आफ्नो राशि संकेत संलग्न छन् र तिनीहरूले ज्योतिष विश्वास गर्दैनन् भने पनि, तिनीहरूले अझै पनि तपाईं आफ्नो संकेत थाह के सुनेर पूर्णतया खुला छन्. राशिफल चिन्हहरू आफूलाई अर्को विस्तार हो र मानिसहरूले जस्तै केही हामी आफूलाई नयाँ कुराहरू सिक्न भन्दा धेरै प्रेम छ.
तपाईं एक साथी मा के हेर्नुहुन्छ?
यो एउटा महत्त्वपूर्ण पहिलो तारीख प्रश्न छ. यो तिनीहरू अन्य व्यक्ति तर्साउन चाहँदैनन् किनभने daters को एक धेरै सोधेर जोगिन कुरा हो. तर यो प्रश्न आफ्नो मिति आँखामा जम्मा र तपाईं को तुलना मा भइ सकेको जहाँ मान्छे को प्रकार मा अन्तरदृष्टि दिनेछु. तपाईं तिनीहरूलाई सहमत छैन भने आफ्नो प्रतिक्रिया को पनि आलोचक कोसिस. यो आफ्नो व्यक्तिगत चासोमा आधारित छ र जस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ. यो प्रश्न सोधिएको छ पछि, यो पहिलो मिति धेरै कुरा मा ढकमक्क क्षमता छ भने तपाईं पक्का थाह हुनेछ.